वृद्धवृद्धालाई जाडोबाट कसरी जोगाउने? के खुवाउने?
नेपाल लाइभ सोमबार, पुस २८, २०७६, ०६:१५
जाडोबाट बच्न न्यानो लुगा, बस्ने उचित व्यवस्था मिलाउनुका साथै दैनिक खानामा पनि ध्यान पुर्‍याउन सकेमा यस्ता समस्या हुनबाट केही हदसम्म जोगिन सकिन्छ। भन्डै ९० प्रतिशत जति व्यक्तिको स्वास्थ्य स्थिति उसले खाने खानामा भर पर्छ।
दैनिक भोजनको योजना गर्दा पोषिलो खाद्यसमूहबाट पर्ने गरी खाद्यपदार्थको छनोट गर्नुपर्छ।
मौसमअनुसार खाद्यपदार्थको छनोट गर्नुका साथै बुढाबूढीले खाना चपाउन तथा पचाउन सक्ने हुनुपर्छ।
यस अवस्थामा छिटो खान नसक्ने र चाँडै खाना चिसो हुने भएकोले थोरै तर पटकपटक दिँदा बेस हुन्छ।
प्रोटिन तत्वहरु शरीरमा राम्ररी शोषण नहुने भएकोले यी तत्वहरुको परिमाण र गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ।
बुढाबुढीलाई दिने खानाको उचित छनोट गर्नुका साथै पकाउने उपयुक्त विधि अपनाउनुपर्छ। किनकी प्रायजसोको दाँत र गिजा कमजोर हुने भएकाले उनीहरु नरम खाना रुचाउने हुन्छन्।
प्रायः जाडो मौसममा शरीरको तापक्रम कम भई बिसन्चो हुने, चेतना हराउने, एकाग्रता नहुने, विस्तारै श्वास फेर्ने, नाडी कमजोर हुने उचित उपचार नपाएमा मृत्युसमेत हुनसक्ने भएकोले पोषिलो तथा तातो खानाको व्यवस्थाका साथै सम्बन्धित चिकित्सकसँग उचित परामर्श लिनुपर्छ।
प्रशस्त तातो पोषिलो झोल पदार्थ पानी पिउन दिनुपर्छ। यस उमेरसम्म आफ्नै प्रकारको खाना खाने प्रवृत्ति तथा बानी हुने भएकोले सम्झाइबुझाइ नकारात्मक बानीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ।
दैनिक खानामा प्रशस्त मात्रामा दुध, माछा, मासु, अन्डा, हरियो सागपात, ताजा फलफूल समावेश गर्नुपर्छ।
भिटामिन ‘सी’ युक्त फलफूल, जुस, सुप दैनिक भोजनमा कमसे कम एक पटक समावेश गर्नुपर्छ।
इच्छा लागेर पनि दाँतको कारणले वा खान गाह्रो भई कतिपय खानेकुरा खान नसक्ने हुन्छ। जसले गर्दा कहिलेकाहीँ वृद्धहरु पोषिलो खानाबाट वञ्चित हुन बाध्य हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा मसिनो गरी काटेर अन्य खाद्यपदार्थको साथ मिलाई नरम पारेर पकाउनेजस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
यदि खानाप्रति रुचि कम छ भने सकेसम्म स्वादिलो तवरले आकर्षक ढंगले सजाएर खुवाउँदा बेस हुन्छ।
सकेमा मुख्य खानाको बीचबीचमा दुध, सुप, जुस दिँदा बेस हुन्छ। साथै राति सुत्नुअगाडि तातो दुध पनि दिन सकिन्छ। थर्मसमा सम्भव भए तातो झोल पदार्थ अथवा नभए तातो पानी मात्र भए पनि राखिदियो भने बुढाबूढीहरु आफैंले समयसमयमा पिउन सक्छन्।